Ukupakisha i-Skateboard ye-Right for Your Child
Ngethuba elincinci lifikelela kwiminyaka eli-12 okanye eli-13 ubudala, akukho mbuzo ukuba uya kufuna i-skatebhodi evakalelwa njengento yokusetyenziswa kwemisebenzi-zombini kunye nobukhulu. Kodwa kuthekani ngabadlali abancinci be-skateboarders-abaneminyaka emine okanye emihlanu ubudala abafumana nje kwimidlalo? Ziziphi izikhokelo ezikhoyo kubazali bakhethe umzekelo omncinci we-skateboarders?
Ubungakanani be-Kid okanye Ubuntu abadala?
Kwinqanaba elisisiseko, akukho ntlukwano phakathi kwe-skateboards kubantwana kunye ne-skateboards kubantu abadala.
Ezinye iinkampani zenza iincinciards ezincinci ezifutshane malunga ne-21 "okanye 22" ubude, kodwa oku kungakumbi umthengiso kunokuba kufuneka iimfuno zabathengi. Iipateboards ezincinci zingonwabile, kodwa kungcono ukuba abantwana bakwazi ukukhula kwimidlalo besebenzisa i-skateboard egcweleyo, 27 ukuya kwi-intshi ezingama-31 ubude. Ngaphezu koko, i-skateboards esipheleleyo i-skateboards ayikho enkulu. Uninzi oluneminyaka engama-4 ubudala kufuneka lube luhle ngebhodi eliqhelekileyo. Ngaphezulu, ii-skateboards zezingane zihlala zi malunga no-6 "ububanzi, kwaye abantwana banokwenza ngcono nge-7.5" -kontenki ebanzi ebhodini elipheleleyo.
Abavelisi abahlukeneyo bahlula iibakala zabo ezahlukeneyo ze-skatebhodi basebenzisa isigama esahlukileyo. Enye inguqu ye-Beginner, Advanced and Pro yinkqubo yeklasi esetyenziswe ngabaninzi babo. Kwabanye abakhiqizi, luyi-Rookie uchungechunge ngokulandelelana kwepro. Ukwahluke- lwa koko kusebenza kwizixhobo ezisetyenziswayo kumavili kunye neebherethi, kunye neebhodi zokuqala ngokusebenzisa izinto ezincinci kwiivili, ezisebenza bhetele kwisitalato / kwindlela yokuhamba.
Iiphodi zepro, ngakolunye uhlangothi, zinamavili anzima kakhulu kunye neebhetri eziphezulu. Zenzelwe ukuzinza nokukhawuleza, kwaye zikhanyise ngokusetyenziswa kwe-skatepark. Kukho na ukungafani nokwakhiwa kwebhodi ngokwayo (ebizwa ngokuba yidonki ). Iiprobhodi zeprojekthi zingasebenzisa ukwakhiwa kwamatye amaninzi okwenzelwe ukulwa nokuphulwa phantsi kokusetyenziswa kanzima komdlali owenza izinto.
Kuba abantwana beqala nje, nangona kunjalo, akukho sizathu sokuqhaqhaza kwibhodi ebiza kakhulu, kuba abantwana abayi kuzuza ngokwenene kwiimpawu ezongeziweyo zebhodi ye-pro-grade. Ibhodi elingama-25 okanye i-30-intshi ye-22 intshi ibhodi elide liyakwenza kakuhle ukuba i-skater encinane i-10 okanye 12 ubudala. Ukuba usenomdla ngomdlalo ngelo xesha, unokuqwalasela ukunyuka ukuya ebhodini ubiza i-$ 100 okanye ngaphezulu.
Kuphi ukuthenga i-Skateboard yakho yengane
Ukuba ungathanda ukugcina elincinci, kukho imveliso emininzi yokulungelelanisa i-skaters apha. Kodwa esinye isincomo esisisigxina ukungazithengi i-skateboard kwisitrato esithile esikhulu samashishini okanye ukuthengiswa kwezinto eziqhelekileyo. Gcinana nabavelisi abaziwayo beebhodi zokudlala eziphezulu. Lezo nkampani ezenza ezifanelekileyo iipaldi zamanqanaba eziphambili zifanelekileyo ukubheja xa kuziwa ekuthengeni ibhodi ye-rookie-grade.
Ukuthenga i-skateboard kwi-intanethi kulungile, ngaphandle kokuba yenziwe yinkampani ehloniphekileyo.
Kwaye uye phambili kwaye uvumele umntwana wakho athathe ibhodi eneemifanekiso eziyithandayo. Oku kunokuba kubonakale kumncinci kumzali ochaphazelekayo kakhulu ngomgangatho wokwakha, kodwa imifanekiso kwi-skateboard ibaluleke kakhulu kwi-skater kwaye inokunyusa kakhulu umdlalo wezemidlalo.
Musa ukulibala i-Gear Protection
Elinye igama lokugqibela-qiniseka ukuba ufumana i helmet i-skateboard . Emva koko, ungayifumana kunye naye, kunye naye. Izigulane ze-knee kunye neelindi zesosa nazo zinokunceda. Ngaphandle koko, kufuneka ulungile. I-Termite kunye nezinye iimpawu zenza iikiti ze- skatebhodi zedidi zezingane. Uze uhlaziye ulwazi malunga nokukhuseleko lwe-skateboard. Umntwana wakho-ukuba angakutshilo njengomzali-uya kuonwabela umdlalo ngakumbi xa ukhusela ukulimala kakhulu.
UbuBuddhism bomhlaba obulungileyo
Ubomi beStats Patrick kunye neMimangaliso
Indlela yokwenza iiNayile eziMandla ngokukhawuleza usebenzisa iSayensi
UDirico, uMax Ernst, uMagritte noBalthus: Ukukhangela kwi-Invisible
Kuphi i-sodium etholakala kwiTable Periodic?